ဂါထာမကြောက်တဲ့ ဘုန်းကြီးပြိတ္တာနဲ့ ဘုန်းကြီးလူထွက် ဦးပေါတို့ရဲ့သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာအစွမ်းနဲ့ တွေ့ကြသော အခါ - Mega Wave
မင်္ဂလာပါ ပရိသတ်ကြီးရေ ဒီနေ့ဖော်ပြပေးမှာကတော့ သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာ ၏ အစွမ်းနဲ့ အနက် အဓိပ္ပါယ်ကို မသိသေးသူများအတွက်
အနက် အဓိပ္ပါယ်ကိုသေချာ သိရှိအောင် ပြန်လည်မျှဝေပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂါထာတွေ မန္တာန်တွေ ဘယ်လောက် ရွတ်ရွတ် အနက်အဓိပ္ပါယ် မသိရင် အစွမ်းမထက်ပါဘူး။
အဲ့ဒါကြောင့် ဘုန်းကြီး သရဲနှင့်ဘုန်းကြီး လူထွက်ဆရာတစ်ယောက်အကြောင်းကို ဓမ္မဒူတဒုတိယ တွဲတွင် ဖက်ရှု့ရသော ဖြစ်ရပ် တစ်ခုကိုဖော်ပြပါမည်။
အင်းဝမြို့ မှဦးပေါအမည်ရှိ ကုန်သည်ကြီး တစ်ယောက်သည် လှေကြီးတစ်စင်းထောင် ၍ထန်းလျှက်၊ ဇီးသီးခြောက်၊ ပဲ စသော အညာကုန်များ တင်၍ အောက်ပြည်အောက်ရွာ တွင်ရောင်းချပြီး
အောက်ပြည်အောက်ရွာမှ ငါးပိ၊ ငါးခြောက် များကို ပြန်တင်ပြီး အညာဒေသတွင် ပြန်ရောင်းချကာ အသက်မွေးလျက်ရှိသည်။
ကုန်သည် ဦးပေါ သည် ရဟန်းလူထွက် စာတတ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတစ်နေ့ တွင်အညာကုန် များတင်၍ မြစ် ကြောင်းတစ်လျှောက် စုန်ချ လာရင်း
ပုဂံမြို့အောက်နား အရောက်တွင် မိုးချုပ်သွားသဖြင့် လှေကို ကမ်းနှင့် မနီးမဝေး တွင်ကျောက်ချပြီး ညအိပ်ရပ်နားကြသည်။
လှေထိုးသားများ အိပ်သွားသော်လည်း ခေါင်း ဆောင်လှေသူကြီး ပီပီ မအိပ်သေး ဘဲပဲ့စင်ပေါ်တွင် ပရိတ်ရွတ် မေတ္တာပို့လျှက် ရှိသည် ဘုရားဝတ်တက် အားလုံးပြီးမှ ဦးပေါလည်း မှေးကနဲတစ်ချက်အိပ်ပျော် သွားသည်။
အအိပ်အနေနည်းသည့် အရွယ်ဖြစ်သဖြင့် နှစ်နာရီလောက်တွင် တရေးနိုးလာသည်။
ဆေးလိပ်သောက်တတ်သော အကျင့်ရှိသဖြင့် ပြောင်းဖူး ဖက်ဆေးလိပ် ကြီး ကိုပါးစပ်တွင် တပ်လိုက်ကာ သံတုံးလေးနှင့် မီးခတ်ကျောက်ကို ကိုင်ပြီးမီးခြစ် လိုက်သည်အဆင် မသင့်သဖြင့် လက်ထဲမှသံတုံးလေး မှာမြစ်ထဲ ကျသွားသည်။
ဆေးလိပ်ကလဲ သောက်ချင်နေ သောအခါ လှေထိုးသား တစ်ယောက်ယောက် ကိုနှိုးပြီး သံတုံးတောင်းရန် သတိရသော်လည်း မောမောနှင့် အိပ်ပျော်နေသော လှေထိုးသား ကိုလည်း မနှိုးရက် သဖြင့်ကမ်းပေါ်သို့ မျက်စိကစားကြည့်လိုက်ရာ
ခပ်လှမ်းလှမ်း တံငါတဲတစ်တဲမှ မီးရောင်ထွက်နေသည် ကိုတွေ့ရသဖြင့် ဆေးလိပ် မီးညှိရန်ကမ်းပေါ် အသာတက်ခဲ့တော့သည်။
မီးရောင် ထွက်သောနေရာ ရောက်သော အခါတွင်တော့ ဦးပေါခြေလှမ်းများ တုန့်ကနဲရပ်သွားပြီး ကြက်သီးမွှေးညှင်း များထသွားသည်
အံ့သြထိတ်လန့်စရာကောင်း လောက်အောင် ပြူးကျယ်သော မျက်လုံးနှင့် ဟ သွားသော ပါစပ်တို့ မှာ တော်တော်နှင့် ပုံမှန်ပြန်မဖြစ်
မြင်လိုက်ရ သောမြင်ကွင်းက အမွှေးစုပ်ဖွားနှင့် ဆင်တစ်ကောင်၏ ပမာဏထက် ကြီးမားသော မဲမဲလုံးလုံး ပြိတ္တာကြီးတစ်ကောင်သည်
ဂဏန်းခေါ်ပုဇွန် လုံးကြီးများ ကို မီးဖုတ်ပြီးတစ်တောင် သာ သာခန့်ပြဲသော ပါစပ်ကြီး အတွင်းသို့ ထည့်ကာ အာရပါးရ စားနေသည်ကို တွေ့ရသော ကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဦးပေါသည်လည်း ကြောက်စိတ် ကိုမနည်းပြန်၍ ထိန်းချုပ်ကာ မိမိရ သောဂုဏ်တော် ဂါထာတော် များကိုရွတ်ဖတ် သရဇ္ဈာယ်လိုက်သည်။
ထူးခြားသည်ကား ပြိတ္တာကြီးသည် ဦးပေါရွတ်နေသော ဂုဏ်တော်ဂါထာတော် များကိုလုံးဝ ဂရုမစိုက်ခြင်းပါ။
ဦပေါ ၏ရွတ်ဖတ်သံကို ကြားသည်နှင့် ပြိတ္တာကြီး သည် သားကောင် ကိုတွေ့လိုက်ရသော ကျားပမာ ဦးပေထံ တစ်လှမ်းချင်းတိုးလာသည်။
ဦးပေါလည်း နောက်ဆုတ်လျှင် ပြိတ္တာကြီးရှေ့ တိုးလာသည် ဦးပေါ ရပ်လျှင် ပြိတ္တာကြီးကလည်းရပ်သွားသည်။
ဂုဏ်တော်ဂါထာတော်ကို ပင်မကြောက်သော ပြိတ္တာများကို ယခုတစ်ခါသာတွေ့ရဘူး၍ ဦးပေါ မှာ ဘာလုပ်ရမှန်း မသိအောင် ဇောချွေးပျံနေ သည်။
ခဏကြာသော အခါတွင် မရွတ်မိဘဲ မေ့ကျန်နေသော သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာတော်ကြီး ကို သတိရသွားသည်။ ရွတ်ဖို့ကြံလိုက်သည်နှင့် ထူးခြားချက် တစ်ခုကို တွေ့ရသည်။
ပြိတ္တာကြီး ထံမှမရွတ်နဲ့ ဟူသော အသံကြီး ကို ကြားလိုက် ရသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ဦးပေါကား ပြိတ္တာကြီးကြောက်သော လက်နက် ကိုတွေ့သွားလေပြီး
ဦပေါ သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာ ကိုစ၍ရွတ်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် ပြိတ္တာကြီး လည်း နောက် သို့ လှည့်ကာပြေးတော့သည်။
ဦးပေါလည်း အားတက် သွားကာ သမ္ဗုဒ္ဓေဂါ ထာ ရွတ်ရင်း ပြိတ္တာကြီးနောက် သို့လိုက်လေသည်။
လူတစ်ခေါ်သာသာ ခန့်အရောက်တွင် ကျောင်းအိုကြီး တစ်ခုထဲ ဝင်ရောက်ပျောက်ကွယ် သွားသည် ကို တွေ့ရသဖြင့် နေရာကိုသေချာ မှတ်ထာကာ လှေရှိရာသို့ ပြန်ခဲ့သည်။ အပြန်ခရီးကျမှသေချာစုံစမ်း ကြည့် ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်သည်။
လှေသားများကို ကြောက်လန့်မှာ စိုးသဖြင့်ဖွင့်မပြောပေ အောက်ပြည် မှ အပြန်တွင်ပြိတ္တာကြီး ကိုတွေ့သောနေရာတွင် လှေကိုခဏရပ်ကာ လှေ သား သုံးယောက်လောက် ကိုခေါ်ပြီးပြိတ္တာကြီး ရှိရာကျောင်းအိုကြီး ဝင်းထဲသို့ ဝင်ကြည့်ကြသည်။
ကျောင်းဝင်းကြီး မှာသီးပင်၊ စားပင် များဖြင့် သာယာလှပနေသည် ကို တွေ့ရသည် ကျောင်းကြီးမှာလည်း အကောင်းကြီး ရှိသေသည်
ပြုပြင် မှုသန့်ရှင်းမှု မရှိလို့သာ ဟောင်းနွမ်း နေခြင်းဖြစ်သည် ။ ဘုန်းကြီးကျောင်းခြံဝင်း တစ်နေရာတွင်ကား ရေတွင်းတစ်တွင်း ကို တွေ့ရသည်။
ရွာသူရွာ သား အချို့ရေခပ်နေသည် ကိုတွေ့ရသဖြင့် အနား သွားပြီးရွာသားတစ်ယောက်ကို မေးကြည့်ရသည်။ မိတ်ဆွေ ဒီကျောင်းက ဘုန်းကြီးမရှိဘူးထင်တယ်..သြော် ခင်ဗျား တို့က ဒီအရပ်က မဟုတ်ဘူးထင်တယ်..
ဒါကြောင့် ဒီကျောင်းအကြောင်း ကိုလာမေးတာနေမှာ.. မဟုပ်ပါဘူးအင်ဝဘက်ကပါ ဟောဟိုက လှမ်းမြင်ရတဲ့လှေကြီး ကခရီးသည်တွေ ပါသိချင်ရင်လည်း ပြောရတာပေါ့။
ဒီကျောင်းက ပထ မဆုံး ထိုင်တဲ့ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီး ဟာပျံလွန်တော်မူပြီး မကျွတ်ပဲဒီမှာ ပြိတ္တာလာဖြစ်နေတယ် နှစ်အတော်ကြာပြီ
ကျောင်းထိုင် ဘုန်းကြီးအသစ်တင်ရင်လည်း ဝမ်းလျှော်ပြီး သေအောင် လုပ်ပစ်တယ် နောက်တက်တဲ့ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီး သုံးပါးလောက်သေပြီး တဲ့နောက်နောက်ထပ်ဘယ် ဘုန်းကြီးမှဒီကျောင်းမှာ ကျောင်း မထိုင်ရဲကြတော့ဘူး။
ဒါ့ကြောင့်အခု အချိန်ထိကျောင်းကြီး က ဒီလိုကြီးဘဲဖြစ်နေတာ ကမ္မဝါ တို့ ပရိတ်တို့ ရွတ်ပြီးနှင် မထုတ်ကြဘူးလားဗျာ။
ကမ္မဝါတို့ ပရိတ်တို့ လောက်ကတော့ လုံးလုံးကို ဂရုမစိုက်တာဗျို့ လာရွတ်တဲ့ ကိုယ်တော်တွေ သာသူကချောက်လွှတ် လိုက်လို့ထွက်ပြေးကြရတယ်။
သူကတော့ ဒီအတိုင်းနေမြဲဘဲ အင်းဟုတ်မှာဘဲ ငါပရိတ်တွေ ဂါထာတွေ ရွတ်တာတောင် ဂရုမစိုက်ဘဲ ပေရပ်နေသေးတာဘဲဟု ဦးပေါ က ဆက်တွေးနေမိသည် ။
ရွာသားက စကားတစ်ခွန်းကောက်မေးသည် ဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့ ပယော ဂလေးဘာလေး သေချာမကုတတ် ကြဘူးလားဗျာ။
ဘယ်သူဘာဖြစ်နေလို့လဲ ဒီရွာကသူကြီး သမီးပျိုလေးဟာ တစ်ရက်ရေတွင်းမှာ တစ်ယောက် တည်းရေခပ်နေချိန်
အဲ့ဒီအချိန်မှာ ပြိတ္တာကြီးက ကျောင်းပေါ်ကဆင်းလာပြီး မိန်းကလေး ကိုပွေ့လိုက်သတဲ့ မိန်းကလေးလည်း လန့်ပြီးတစ်ခါ တည်း သတိလစ် သွားတာပဲ
အိမ်ရောက်တော့ ရေမန်းတွေဘာတွေ နဲ့ သတိရအောင် မနည်းမန်းမှုတ်ယူရတယ်။ သတိကောပြန်ရ ရဲ့လား? သတိတော့ပြန်ရပါရဲ့..ဒါပေမယ် စိတ်မကောင်းတော့ဘူး ရူးသွားတယ်။
ကိုယ်မှာအဝတ်တောင်ကောင်းကောင်း မကပ်ဘူးအစားရော စားသေးလား စားလိုက်တာမှ အမဲဝမ်းတွင်း သားချည်းပဲ..
တစ်ခါ စားရင်နှစ်ပိသာချက်လောက် ကုန်တယ် ဒါဆိုရင် ဒီပြိတ္တာကြီး က ပူးကပ်ပြီးစားနေတာပဲဗျာ့ သူ့ မိဘတွေကပယောဂ ဆရာတွေဘာတွေ နဲ့ဆေးမကုဘူးလား ကုတာလည်း ဆရာတော်တော် စုံသွားပြီဗျာ့ တစ်ယောက်မှ မနိုင်ဘူးထွက်ပြေးရတာချည်းပဲ။
ရွာသား၏ စကားအဆုံးတွင် ဦးပေါက ပြိတ္တာကြီးကြောက်သော သမ္ဗုဒ္ဓေ ဂါထာကြီး ကိုသတိရလိုက်သဖြင့် ဒါဖြင့်လည်း ခင်ဗျားတို့ သူကြီးကို ပြောလိုက်ဗျာ
အင်းဝက ပယောဂကုဆရာတစ်ယောက် ရောက်နေတယ်ကုကြည့်ချင်ရင်လာပင့် လို့ပြီးတော့မပျောက် ရင်တစ်ပြားမှပေးစရာ မလိုဘူး ဆိုတာပါပြောလိုက်ဗျာ။
ထိုသို့ပြောပြီး သည်နှင့်ဦးပေါတို့ ဆရာတပည့်များ လှေသို့ပြန်သွားကြသည် နောက်တစ်နေ့ မနှက်မှာပင် လှေရှိရာသို့ သူကြီးလွှတ်လိုက်ေ သာနွားလှည်း တစ်စီးရောက်လာ သဖြင့်ဦးပေါ ကသတ္တိ ကောင်းသော လှေထိုးသား တစ်ယောက် ကိုခေါ်ကာ လိုက်သွားလေသည်။
ဦးပေါက သူကြီး အိမ်ပေါ်တက်လိုက် သည်နှင့်အိမ်နောက်ခန်း ထဲမှ မလောက်လေး မလောက် စားဆရာ ကိုခေါ်လာပြန်ပြီလား။
အားလုံး ချက် ချင်းသေသွားချင် သလားဟူသောကြိမ်းဝါး သံကြီးက မင်္ဂလာ ကင်းမဲ့ စွာကြိုဆိုလိုက်သည်။ လူနာမိန်းကလေး ကိုပူးကပ်ပြီးပြောလိုက်သော ပြိတ္တာကြီး၏ အသံပါတည်း
ရိုးရိုးကုတ်ကုတ်ဟိတ်ဟန် မပါဘဲလိုက်လာသော ဦးပေါကိုတွေ့ရသည်နှင့်သူကြီး ကအထင်သေး သွားဟန်တူသည်
ထွက်လာသောစကားက ဆရာနိုင်မယ်မထင်ရင်လည်း စောစောကပြန်ပါဗျာ လူနာအခြေ အနေကတော့ စောစောကကြားတဲ့အတိုင်းပါပဲ။
တော်ကြာ ကုပြီးမှမနိုင်ရင် ဆရာသိက္ခာကျမှာ စိုးလို့ပြောတာပါ သူကြီး က ကျုပ်မှာဆေးအိတ်မပါလို့ အထင်သေးဟန် တူတယ်စောင့်ကြည့် ပါဦးဗျာ ကျုပ်ကလည်း ဒီမကောင်းဆိုးဝါး ရဲ့နိုင် ကွက်ကို တွေ့ထား လို့ လာကုတာပါ။
ဒီပြိတ္တာကြီး ကို ကျုပ်ထုတ်လိုက်လို့ ထွက်သွားတဲ့ အခါနောက် ကနေ ခြောက်လှန့် ထုတ်ရ အောင်အား ကောင်းမောင်းသန် ယောက်ျားနှစ်ဆယ်ယောက် နဲ့
ဓားတွေ လှံတွေလင်းကွင်းတွေ သံပုံးတွေလိုချင်ပါတယ် ရနိုင်မယ် ဆိုရင်ဗျောက်အိုး တွေဘာတွေပါ ရရင်ပိုကောင်းမယ်။
ကျုပ်က ဒီကောင်ကြီး ကိုရွာထဲမှာရော ကျောင်းမှာပါ မနေနိုင်အောင် လုပ်ပေးခဲ့ မှာပါသူကြီးက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော်တော် အထင်ကြီး တဲ့ ဆရာ ပဲဟူသော အကြည့်ဖြင့် တစ်ချက်ကြည့်ကာ ဦးပေါတောင်း ဆိုသည့် အတိုင်းစီစဉ်ပေးလိုက်သည်။
အားလုံးပြီးသည်နှင့် ဦးပေါက ဘုရားရှိခိုး ငါးပါး သီလ ဆောက်တည် လိုက်သည်။ ထိုအချိန်မှာပင် အခန်းထဲကလူနာက သောင်းကျန်းနေလေပြီ..
ဒီဆရာ ကိုပြန်လွှတ် ငါ့အခန်းထဲ မလာစေနဲ့ ဟုအော်ဟစ်နေသည် ဦးပေါက ဒီကတည်းက သူအနိုင် ရနေပြီဖြစ်ကြောင်း ကောင်းကောင်းနား လည်လိုက်သည်။
စွမ်းနိုင်သမျှ ပို၍ စွမ်းရန်သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာတော်ကြီး ကိုလည်း ရေခွက်တွင်အ ခေါက်ခေါက်အခါခါမန်းလိုက်သည်။
ဂါထာ၏ အဓိပ္ပာယ်ကို နားလည်ပြီး မန်းလျှင်ပိုစွမ်းပါသည်။ ထိုကြောင့် အဓိပ္ပာယ် မသိသေးသူများ အတွက် ပါဠိနှင့် အဓိပ္ပာယ် တွဲဖက်၍ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
သမ္ဗုဒ္ဓေ အဋ္ဌဝီသဉ္စ ဒွါဒသဉ္စ သဟဿကေ ပဉ္စသတ သဟဿနိ နမာမိ သိရသာမဟံ နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူ (၂၈) ဆူ ကုန်သော ဘုရားရှင် တို့ကို လည်းကောင်း တစ်သောင်းနှစ်ထောင် ကုန်သော ဘုရားရှင် တို့ကိုလည်းကောင်း
ငါးသိန်း ကုန်သော ဘုရားရှင်တို့လည်းကောင်း အကျွန်ုပ် သည် ဦးခေါင်းရတနာဖြင့် ရှိခိုးပါ၏။
အပ္ပကာ ဝါဠုကာ ဂင်္ဂါအနန္တာ နိဗ္ဗုတာ ဇိနာ တေသံ ဓမ္မဉ္စ သံဃဉ္စ အာဒရေန နမာမဟံ ဂင်္ဂါမြစ် အတွင်းမှာ ရှိကြသော သဲလုံး တို့ကနည်းကြ ပါသေး၏။
ပရိနိဗ္ဖာန်ပြုသွားကြသော ဘုရားရှင် တို့ကားရေ တွက် ပိုင်းခြား၍ပင် မရနိုင်ပါ။
ထိုများပြားလှသော ဘုရားရှင်တို့ကို လည်းကောင်း၊ထိုဘုရားရှင် အားလုံးတို့ ၏တ ရားတော် တို့ကိုလည်းကောင်း ထိုဘုရားရှင် အား လုံးတို့၏တပည့်သံဃာတော် များကို လည်း ကောင်း အကျွန်ုပ်သည်ရိုသေစွာ ရှိခိုးပါ၏။
နမက္ကာရာ နုဘာဝေန ဟိတွာ သဗ္ဗေ ဥပဒ္ဒဝေ အနေက အန္တာရာယာပိ ဝိနဿန္တု အသေ သတော
ဤသို့ ရှိခိုးပူဇော်ရသော ကုသိုလ်စေတနာ တို့ကြောင့် ခပ်သိမ်းသောဘေးရန်တို့ကို ပယ်ဖျောက်ပြီးတစ်ပါး မက များပြား လှသည့်အန္တရာယ်ဟူသမျှ တို့အကြွင်း အကျန်မရှိ ကြွင်းမဲ့ဥဿုံကင်းပျောက် ပါစေကုန်သတည်း..
အားရအောင် မန်းပြီးသည်နှင့် ရေမန်းခွက် ကိုကိုင်ကာ သူကြီးနှင့် အတူလူနာအား ထားသော အခန်းထဲသို့ ဝင်လိုက်ကြသည်။
အခန်းထဲ ဝင်လာသော ဦးပေါကို လူနာမိန်းကလေးက မျက် လုံးကြီးပြူးပြီး အံကြိတ်ကာ ကြည့်နေလိုက်သည် မှာကြောက်တက်သူဆိုလျှင် ကျောချမ်း စရာပင်ကောင်းလှ၏။
ဦးပေါ ကမကြောက်မရွံ့မျက်လုံး ဆိုင်၍သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာ ကိုစိတ်ထဲက ရွတ်ပြီး ပြန်စိုက်ကြည့်လိုက်ရာ လူနာမှာ ဆက်လက်မကြည့်ရဲတော့ ဘဲ မျက်နှာလွှဲသွားတော့၏။
ထိုအခါ ကျမှသူကြီးမှာသူ့ဆရာ အတွက် အနည်းငယ် အားတက်လာ ၏..
ထိုအချိန်မှာပင် ဦးပေါက နောက်ဆုံးအား ဖြည့်သည့် အနေဖြင့်သမ္ဗုဒ္ဓေ ဂါထာတော်ကြီး ကိုအ ခေါက် အနည်းငယ်ထပ်၍ ရွတ်လိုက်ရာ ဂါထာ မဆုံးမီ မှာပင်မိန်းကလေးမှာ သူ့ဖခင်ခြေရင်း တွင်ပုံလျက်လဲကျသွားသည်။
ထိုအခါ ကျမှပူးကပ်နေ သော မကောင်းဆိုးဝါး မဲမဲကြီးကို အခန်းထောင့်တွင် ထင်ထင်ရှားရှား တွေ့လိုက်ကြရသည်။
သမ္ဗုဒ္ဓေသံကိုမခံနိုင်ဖြင့် မိန်းကလေး ကိုယ်မှခွာထွက်ခွာ သွားခြင်းဖြစ်သည်။
ဦးပေါက အချိန်ဆိုင်းမနေတော့ဘဲ မကောင်း ဆိုးဝါးကြီးထံ သို့ရေမန်း လှမ်းပက်လိုက်ရာ မကောင်းဆိုးဝါး ကြီးမှာပွက်ပွက်ဆူနေသော ရေေ နွးဖြင့် အလောင်း ခံလိုက်ရသောခွေး ကဲ့သို့ ကြောက်မက်ဘွယ်ရာ အသံနက်ကြီးနှင့်အော် ၍ဆင်းပြေးတော့သည်။
ထိုအခါ အသင့်စောင့်နေသော ရွာသားများက ဓားများတုတ်များ လှံများဖြင့် ခုတ်ကြရိုက်ကြထိုး ကြနှင့်နောက်မှလိုက်ကြသည်။
သံပုံး လင်း ကွင်း များကိုလည်းတီး ဗျောက်အိုးများကိုလည်း ပြိုင်တူဖောက်ကြ သဖြင့် ရွာထဲတွင်တိုက်ပွဲတစ်ခု ကဲ့သို့ပင် ဖြစ်သွားသည်။
ခွေးများကလည်း လူများနှင့် အတူအူကြဟောင်ကြနှင့် နောက်မှတသီကြီး လိုက် သွားကြသည်။
ပြေးရင်းလွှားရင်းမှပင် မကောင်းဆိုးဝါးကြီးက ထန်းပင်လောက်ကြီးမြင့်သွား လိုက်တစ်ခါတစ်ရံ ခေါင်းကြီးပျောက်သွားလိုက် တစ်ခါတစ်ရံခြေ ထောက်နှစ်ချောင်းလောက်သာ မြင်ရတော့သည် အထိကြီးသွားလိုက်နှင့် ခြောက်လှန့်ပြသေးသည်။
သို့သော် ရွာသားများက လူအုပ်ကလည်းများ သဖြင့်လုံးဝမကြောက်ကြတော့ ရွာနှင့် အတော်ကြီးဝေးသော တောစပ်အထိရောက်အောင် မောင်းထုတ် လိုက်ကြလေသည်..
မကောင်းဆိုး ဝါးကြီးထွက်သွား သဖြင့် မိန်းကလေးမှာ နွမ်း နယ်ပင်ပန်း သည်ကလွဲ၍ရောဂါအားလုံး ကင်းစင် လွင့်ပျောက်သွားတော့သည်။
ထိုအခါကျမှ သူကြီးတို့ဇနီးမောင်နှံမှာ သမီးလေးမှာ ဆရာကယ်တဲ့ အသက်သာ ရှိပါတော့သည်ဟု ဆိုပြီး လွန်စွာကျေးဇူးတင်လှ သဖြင့်ငွေသား စစ်စစ်သုံး ပိဿာကို ကလပ်နှင့် တင်ကာသမီးကို ဦးပေါအား ကန်တော့စေသည်။
ထိုအခါကျမှ ဦးပေါက သူသည် ပယောဂဆရာတစ်ယောက် မဟုတ်ဘဲ
အရောင်းအဝယ် လုပ်သောကုန်သည် တစ်ယောက်သာဖြစ်ကြောင်း ပြီးခဲ့သည့်လ က တည်းကဤ မကောင်းဆိုးဝါးကြီး ကိုမြစ်ကမ်းစပ် တွင် တွေ့ရသည့်အကြောင်း မကောင်းဆိုးဝါးကြီးသည် သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာ မှတစ်ပါး ဘယ်ဂါထာကိုမှမကြောက်ကြောင်း..
ထိုအချိန်မှာပင် သူကြီး၏ သမီးလေးကို မကောင်းဆိုးဝါးကြီး ကဖမ်းစားထားသည် ဟုကြားသဖြင့်
စေတနာဖြင့်လာရောက် ကုသပေးခြင်းဖြစ် ကြောင်း ရှင်းပြပြီး အတန်တန်ကန်တော့သည်ကြား ကလူနာရှင်များ စိတ်ချမ်းသာစေရန် ငွေသားတစ်ပိဿာကိုသာ လက်ခံလိုက်သည်
လူနာကိုလည်း နောက်ထပ်မကောင်းဆိုးဝါးကြီး ထပ်နောက်ယှက် မလာရန် သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာနှင့် မန်းပြီးလက်ဖွဲ့လုပ်ပေးခဲ့သည်..
ရွာသူရွာသား အားလုံးကိုလည်းညစဉ် အိပ်ယာဝင်ခါနီးတိုင်း သမ္ဗုဒ္ဓေ ဂါထာကြီးကို ရွတ်အိပ်ကြရန်တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
ထို့ပြင်နောက်ကျောင်း ထိုင်ဘုန်းကြီးများကို ပြိတ္တာကြီးကလာပြီးဒုက္ခမပေးစေရန် သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာဖြင့် မန်းထားသောရေ များဖြင့် ကျောင်းတွင်းကျောင်းပြင်အား လုံး ကိုပက်ဖြန်းပေးခဲ့လေသည်။
ထိုအချိန်မှစ နောက်တွင် မကောင်းဆိုးဝါးကြီးသည် ထိုရွာနှင့်ကျောင်း တို့တွင် ဘယ်သောအခါမှ လာရောက်နှောက်ယှက်ခြင်း မပြုတော့ပေ .
.ဖတ်ရှု့အားပေးတဲ့ ပရိသတ်ကြီးလည်း သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာ အနက်အဓိပ္ပါယ်များကို သေချာသိရှပြီးဖြစ်လို့ ကျေနပ်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
မူရင်း ရေးသားသူထံမှ ပြန်လည်ဖော်ပြအာသည်။ Credit.ဆရာလင်းနိုင်။
ဂါထာတှေ မန်တာနျတှေ ဘယျလောကျ ရှတျရှတျ အနကျအဓိပ်ပါယျ မသိရငျ အစှမျးမထကျပါဘူး။
အဲ့ဒါကွောငျ့ ဘုနျးကွီး သရဲနှငျ့ဘုနျးကွီး လူထှကျဆရာတဈယောကျအကွောငျးကို ဓမ်မဒူတဒုတိယ တှဲတှငျ ဖကျရှု့ရသော ဖွဈရပျ တဈခုကိုဖျောပွပါမညျ။
အငျးဝမွို့ မှဦးပေါအမညျရှိ ကုနျသညျကွီး တဈယောကျသညျ လှကွေီးတဈစငျးထောငျ ၍ထနျးလြှကျ၊ ဇီးသီးခွောကျ၊ ပဲ စသော အညာကုနျမြား တငျ၍ အောကျပွညျအောကျရှာ တှငျရောငျးခပြွီး
အောကျပွညျအောကျရှာမှ ငါးပိ၊ ငါးခွောကျ မြားကို ပွနျတငျပွီး အညာဒသေတှငျ ပွနျရောငျးခကြာ အသကျမှေးလကျြရှိသညျ။
ကုနျသညျ ဦးပေါ သညျ ရဟနျးလူထှကျ စာတတျတဈယောကျဖွဈပွီးတဈနေ့ တှငျအညာကုနျ မြားတငျ၍ မွဈ ကွောငျးတဈလြှောကျ စုနျခြ လာရငျး
ပုဂံမွို့အောကျနား အရောကျတှငျ မိုးခြုပျသှားသဖွငျ့ လှကေို ကမျးနှငျ့ မနီးမဝေး တှငျကြောကျခပြွီး ညအိပျရပျနားကွသညျ။
အအိပျအနနေညျးသညျ့ အရှယျဖွဈသဖွငျ့ နှဈနာရီလောကျတှငျ တရေးနိုးလာသညျ။
ဆေးလိပျသောကျတတျသော အကငျြ့ရှိသဖွငျ့ ပွောငျးဖူး ဖကျဆေးလိပျ ကွီး ကိုပါးစပျတှငျ တပျလိုကျကာ သံတုံးလေးနှငျ့ မီးခတျကြောကျကို ကိုငျပွီးမီးခွဈ လိုကျသညျအဆငျ မသငျ့သဖွငျ့ လကျထဲမှသံတုံးလေး မှာမွဈထဲ ကသြှားသညျ။
ဆေးလိပျကလဲ သောကျခငျြနေ သောအခါ လှထေိုးသား တဈယောကျယောကျ ကိုနှိုးပွီး သံတုံးတောငျးရနျ သတိရသျောလညျး မောမောနှငျ့ အိပျပြျောနသေော လှထေိုးသား ကိုလညျး မနှိုးရကျ သဖွငျ့ကမျးပျေါသို့ မကျြစိကစားကွညျ့လိုကျရာ
ခပျလှမျးလှမျး တံငါတဲတဈတဲမှ မီးရောငျထှကျနသေညျ ကိုတှရေ့သဖွငျ့ ဆေးလိပျ မီးညှိရနျကမျးပျေါ အသာတကျခဲ့တော့သညျ။
မီးရောငျ ထှကျသောနရော ရောကျသော အခါတှငျတော့ ဦးပေါခွလှေမျးမြား တုနျ့ကနဲရပျသှားပွီး ကွကျသီးမှေးညှငျး မြားထသှားသညျ
အံ့သွထိတျလနျ့စရာကောငျး လောကျအောငျ ပွူးကယျြသော မကျြလုံးနှငျ့ ဟ သှားသော ပါစပျတို့ မှာ တျောတျောနှငျ့ ပုံမှနျပွနျမဖွဈ
မွငျလိုကျရ သောမွငျကှငျးက အမှေးစုပျဖှားနှငျ့ ဆငျတဈကောငျ၏ ပမာဏထကျ ကွီးမားသော မဲမဲလုံးလုံး ပွိတ်တာကွီးတဈကောငျသညျ
ဂဏနျးချေါပုဇှနျ လုံးကွီးမြား ကို မီးဖုတျပွီးတဈတောငျ သာ သာခနျ့ပွဲသော ပါစပျကွီး အတှငျးသို့ ထညျ့ကာ အာရပါးရ စားနသေညျကို တှရေ့သော ကွောငျ့ဖွဈသညျ။
ဦးပေါသညျလညျး ကွောကျစိတျ ကိုမနညျးပွနျ၍ ထိနျးခြုပျကာ မိမိရ သောဂုဏျတျော ဂါထာတျော မြားကိုရှတျဖတျ သရဇ်ဈာယျလိုကျသညျ။
ထူးခွားသညျကား ပွိတ်တာကွီးသညျ ဦးပေါရှတျနသေော ဂုဏျတျောဂါထာတျော မြားကိုလုံးဝ ဂရုမစိုကျခွငျးပါ။
ဦပေါ ၏ရှတျဖတျသံကို ကွားသညျနှငျ့ ပွိတ်တာကွီး သညျ သားကောငျ ကိုတှလေို့ကျရသော ကြားပမာ ဦးပထေံ တဈလှမျးခငျြးတိုးလာသညျ။
ဦးပေါလညျး နောကျဆုတျလြှငျ ပွိတ်တာကွီးရှေ့ တိုးလာသညျ ဦးပေါ ရပျလြှငျ ပွိတ်တာကွီးကလညျးရပျသှားသညျ။
ဂုဏျတျောဂါထာတျောကို ပငျမကွောကျသော ပွိတ်တာမြားကို ယခုတဈခါသာတှရေ့ဘူး၍ ဦးပေါ မှာ ဘာလုပျရမှနျး မသိအောငျ ဇောခြှေးပြံနေ သညျ။
ခဏကွာသော အခါတှငျ မရှတျမိဘဲ မကေ့နျြနသေော သမ်ဗုဒ်ဓဂေါထာတျောကွီး ကို သတိရသှားသညျ။ ရှတျဖို့ကွံလိုကျသညျနှငျ့ ထူးခွားခကျြ တဈခုကို တှရေ့သညျ။
ပွိတ်တာကွီး ထံမှမရှတျနဲ့ ဟူသော အသံကွီး ကို ကွားလိုကျ ရသောကွောငျ့ဖွဈပါသညျ။ ဦးပေါကား ပွိတ်တာကွီးကွောကျသော လကျနကျ ကိုတှသှေ့ားလပွေီး
ဦပေါ သမ်ဗုဒ်ဓဂေါထာ ကိုစ၍ရှတျသညျနှငျ့တဈပွိုငျနကျ ပွိတ်တာကွီး လညျး နောကျ သို့ လှညျ့ကာပွေးတော့သညျ။
ဦးပေါလညျး အားတကျ သှားကာ သမ်ဗုဒ်ဓဂေါ ထာ ရှတျရငျး ပွိတ်တာကွီးနောကျ သို့လိုကျလသေညျ။
လူတဈချေါသာသာ ခနျ့အရောကျတှငျ ကြောငျးအိုကွီး တဈခုထဲ ဝငျရောကျပြောကျကှယျ သှားသညျ ကို တှရေ့သဖွငျ့ နရောကိုသခြော မှတျထာကာ လှရှေိရာသို့ ပွနျခဲ့သညျ။ အပွနျခရီးကမြှသခြောစုံစမျး ကွညျ့ ရနျဆုံးဖွတျခကျြခလြိုကျသညျ။
ကြောငျးဝငျးကွီး မှာသီးပငျ၊ စားပငျ မြားဖွငျ့ သာယာလှပနသေညျ ကို တှရေ့သညျ ကြောငျးကွီးမှာလညျး အကောငျးကွီး ရှိသသေညျ
ပွုပွငျ မှုသနျ့ရှငျးမှု မရှိလို့သာ ဟောငျးနှမျး နခွေငျးဖွဈသညျ ။ ဘုနျးကွီးကြောငျးခွံဝငျး တဈနရောတှငျကား ရတှေငျးတဈတှငျး ကို တှရေ့သညျ။
ဒါကွောငျ့ ဒီကြောငျးအကွောငျး ကိုလာမေးတာနမှော.. မဟုပျပါဘူးအငျဝဘကျကပါ ဟောဟိုက လှမျးမွငျရတဲ့လှကွေီး ကခရီးသညျတှေ ပါသိခငျြရငျလညျး ပွောရတာပေါ့။
ဒီကြောငျးက ပထ မဆုံး ထိုငျတဲ့ကြောငျးထိုငျဘုနျးကွီး ဟာပြံလှနျတျောမူပွီး မကြှတျပဲဒီမှာ ပွိတ်တာလာဖွဈနတေယျ နှဈအတျောကွာပွီ
ဒါ့ကွောငျ့အခု အခြိနျထိကြောငျးကွီး က ဒီလိုကွီးဘဲဖွဈနတော ကမ်မဝါ တို့ ပရိတျတို့ ရှတျပွီးနှငျ မထုတျကွဘူးလားဗြာ။
ကမ်မဝါတို့ ပရိတျတို့ လောကျကတော့ လုံးလုံးကို ဂရုမစိုကျတာဗြို့ လာရှတျတဲ့ ကိုယျတျောတှေ သာသူကခြောကျလှတျ လိုကျလို့ထှကျပွေးကွရတယျ။
သူကတော့ ဒီအတိုငျးနမွေဲဘဲ အငျးဟုတျမှာဘဲ ငါပရိတျတှေ ဂါထာတှေ ရှတျတာတောငျ ဂရုမစိုကျဘဲ ပရေပျနသေေးတာဘဲဟု ဦးပေါ က ဆကျတှေးနမေိသညျ ။
ရှာသားက စကားတဈခှနျးကောကျမေးသညျ ဒါနဲ့ခငျဗြားတို့ ပယော ဂလေးဘာလေး သခြောမကုတတျ ကွဘူးလားဗြာ။
ဘယျသူဘာဖွဈနလေို့လဲ ဒီရှာကသူကွီး သမီးပြိုလေးဟာ တဈရကျရတှေငျးမှာ တဈယောကျ တညျးရခေပျနခြေိနျ
အဲ့ဒီအခြိနျမှာ ပွိတ်တာကွီးက ကြောငျးပျေါကဆငျးလာပွီး မိနျးကလေး ကိုပှလေို့ကျသတဲ့ မိနျးကလေးလညျး လနျ့ပွီးတဈခါ တညျး သတိလဈ သှားတာပဲ
အိမျရောကျတော့ ရမေနျးတှဘောတှေ နဲ့ သတိရအောငျ မနညျးမနျးမှုတျယူရတယျ။ သတိကောပွနျရ ရဲ့လား? သတိတော့ပွနျရပါရဲ့..ဒါပမေယျ စိတျမကောငျးတော့ဘူး ရူးသှားတယျ။
ကိုယျမှာအဝတျတောငျကောငျးကောငျး မကပျဘူးအစားရော စားသေးလား စားလိုကျတာမှ အမဲဝမျးတှငျး သားခညျြးပဲ..
ရှာသား၏ စကားအဆုံးတှငျ ဦးပေါက ပွိတ်တာကွီးကွောကျသော သမ်ဗုဒ်ဓေ ဂါထာကွီး ကိုသတိရလိုကျသဖွငျ့ ဒါဖွငျ့လညျး ခငျဗြားတို့ သူကွီးကို ပွောလိုကျဗြာ
အငျးဝက ပယောဂကုဆရာတဈယောကျ ရောကျနတေယျကုကွညျ့ခငျြရငျလာပငျ့ လို့ပွီးတော့မပြောကျ ရငျတဈပွားမှပေးစရာ မလိုဘူး ဆိုတာပါပွောလိုကျဗြာ။
ဦးပေါက သူကွီး အိမျပျေါတကျလိုကျ သညျနှငျ့အိမျနောကျခနျး ထဲမှ မလောကျလေး မလောကျ စားဆရာ ကိုချေါလာပွနျပွီလား။
အားလုံး ခကျြ ခငျြးသသှေားခငျြ သလားဟူသောကွိမျးဝါး သံကွီးက မင်ျဂလာ ကငျးမဲ့ စှာကွိုဆိုလိုကျသညျ။ လူနာမိနျးကလေး ကိုပူးကပျပွီးပွောလိုကျသော ပွိတ်တာကွီး၏ အသံပါတညျး
ရိုးရိုးကုတျကုတျဟိတျဟနျ မပါဘဲလိုကျလာသော ဦးပေါကိုတှရေ့သညျနှငျ့သူကွီး ကအထငျသေး သှားဟနျတူသညျ
ထှကျလာသောစကားက ဆရာနိုငျမယျမထငျရငျလညျး စောစောကပွနျပါဗြာ လူနာအခွေ အနကေတော့ စောစောကကွားတဲ့အတိုငျးပါပဲ။
ဒီပွိတ်တာကွီး ကို ကြုပျထုတျလိုကျလို့ ထှကျသှားတဲ့ အခါနောကျ ကနေ ခွောကျလှနျ့ ထုတျရ အောငျအား ကောငျးမောငျးသနျ ယောကျြားနှဈဆယျယောကျ နဲ့
ဓားတှေ လှံတှလေငျးကှငျးတှေ သံပုံးတှလေိုခငျြပါတယျ ရနိုငျမယျ ဆိုရငျဗြောကျအိုး တှဘောတှပေါ ရရငျပိုကောငျးမယျ။
အားလုံးပွီးသညျနှငျ့ ဦးပေါက ဘုရားရှိခိုး ငါးပါး သီလ ဆောကျတညျ လိုကျသညျ။ ထိုအခြိနျမှာပငျ အခနျးထဲကလူနာက သောငျးကနျြးနလေပွေီ..
ဒီဆရာ ကိုပွနျလှတျ ငါ့အခနျးထဲ မလာစနေဲ့ ဟုအျောဟဈနသေညျ ဦးပေါက ဒီကတညျးက သူအနိုငျ ရနပွေီဖွဈကွောငျး ကောငျးကောငျးနား လညျလိုကျသညျ။
စှမျးနိုငျသမြှ ပို၍ စှမျးရနျသမ်ဗုဒ်ဓဂေါထာတျောကွီး ကိုလညျး ရခှေကျတှငျအ ခေါကျခေါကျအခါခါမနျးလိုကျသညျ။
ဂါထာ၏ အဓိပ်ပာယျကို နားလညျပွီး မနျးလြှငျပိုစှမျးပါသညျ။ ထိုကွောငျ့ အဓိပ်ပာယျ မသိသေးသူမြား အတှကျ ပါဠိနှငျ့ အဓိပ်ပာယျ တှဲဖကျ၍ဖျောပွလိုကျပါသညျ။
သမ်ဗုဒ်ဓေ အဋ်ဌဝီသဉ်စ ဒှါဒသဉ်စ သဟဿကေ ပဉ်စသတ သဟဿနိ နမာမိ သိရသာမဟံ နှဈကြိပျရှဈဆူ (၂၈) ဆူ ကုနျသော ဘုရားရှငျ တို့ကို လညျးကောငျး တဈသောငျးနှဈထောငျ ကုနျသော ဘုရားရှငျ တို့ကိုလညျးကောငျး
ငါးသိနျး ကုနျသော ဘုရားရှငျတို့လညျးကောငျး အကြှနျုပျ သညျ ဦးခေါငျးရတနာဖွငျ့ ရှိခိုးပါ၏။
အပ်ပကာ ဝါဠုကာ ဂင်ျဂါအနန်တာ နိဗ်ဗုတာ ဇိနာ တသေံ ဓမ်မဉ်စ သံဃဉ်စ အာဒရနေ နမာမဟံ ဂင်ျဂါမွဈ အတှငျးမှာ ရှိကွသော သဲလုံး တို့ကနညျးကွ ပါသေး၏။
ပရိနိဗ်ဖာနျပွုသှားကွသော ဘုရားရှငျ တို့ကားရေ တှကျ ပိုငျးခွား၍ပငျ မရနိုငျပါ။
ထိုမြားပွားလှသော ဘုရားရှငျတို့ကို လညျးကောငျး၊ထိုဘုရားရှငျ အားလုံးတို့ ၏တ ရားတျော တို့ကိုလညျးကောငျး ထိုဘုရားရှငျ အား လုံးတို့၏တပညျ့သံဃာတျော မြားကို လညျး ကောငျး အကြှနျုပျသညျရိုသစှော ရှိခိုးပါ၏။
နမက်ကာရာ နုဘာဝနေ ဟိတှာ သဗ်ဗေ ဥပဒ်ဒဝေ အနကေ အန်တာရာယာပိ ဝိနဿန်တု အသေ သတော
ဤသို့ ရှိခိုးပူဇျောရသော ကုသိုလျစတေနာ တို့ကွောငျ့ ခပျသိမျးသောဘေးရနျတို့ကို ပယျဖြောကျပွီးတဈပါး မက မြားပွား လှသညျ့အန်တရာယျဟူသမြှ တို့အကွှငျး အကနျြမရှိ ကွှငျးမဲ့ဥဿုံကငျးပြောကျ ပါစကေုနျသတညျး..
အားရအောငျ မနျးပွီးသညျနှငျ့ ရမေနျးခှကျ ကိုကိုငျကာ သူကွီးနှငျ့ အတူလူနာအား ထားသော အခနျးထဲသို့ ဝငျလိုကျကွသညျ။
အခနျးထဲ ဝငျလာသော ဦးပေါကို လူနာမိနျးကလေးက မကျြ လုံးကွီးပွူးပွီး အံကွိတျကာ ကွညျ့နလေိုကျသညျ မှာကွောကျတကျသူဆိုလြှငျ ကြောခမျြး စရာပငျကောငျးလှ၏။
ဦးပေါ ကမကွောကျမရှံ့မကျြလုံး ဆိုငျ၍သမ်ဗုဒ်ဓဂေါထာ ကိုစိတျထဲက ရှတျပွီး ပွနျစိုကျကွညျ့လိုကျရာ လူနာမှာ ဆကျလကျမကွညျ့ရဲတော့ ဘဲ မကျြနှာလှဲသှားတော့၏။
ထိုအခါ ကမြှသူကွီးမှာသူ့ဆရာ အတှကျ အနညျးငယျ အားတကျလာ ၏..
ထိုအခါ ကမြှပူးကပျနေ သော မကောငျးဆိုးဝါး မဲမဲကွီးကို အခနျးထောငျ့တှငျ ထငျထငျရှားရှား တှလေို့ကျကွရသညျ။
သမ်ဗုဒ်ဓသေံကိုမခံနိုငျဖွငျ့ မိနျးကလေး ကိုယျမှခှာထှကျခှာ သှားခွငျးဖွဈသညျ။
ထိုအခါ အသငျ့စောငျ့နသေော ရှာသားမြားက ဓားမြားတုတျမြား လှံမြားဖွငျ့ ခုတျကွရိုကျကွထိုး ကွနှငျ့နောကျမှလိုကျကွသညျ။
သံပုံး လငျး ကှငျး မြားကိုလညျးတီး ဗြောကျအိုးမြားကိုလညျး ပွိုငျတူဖောကျကွ သဖွငျ့ ရှာထဲတှငျတိုကျပှဲတဈခု ကဲ့သို့ပငျ ဖွဈသှားသညျ။
ခှေးမြားကလညျး လူမြားနှငျ့ အတူအူကွဟောငျကွနှငျ့ နောကျမှတသီကွီး လိုကျ သှားကွသညျ။
သို့သျော ရှာသားမြားက လူအုပျကလညျးမြား သဖွငျ့လုံးဝမကွောကျကွတော့ ရှာနှငျ့ အတျောကွီးဝေးသော တောစပျအထိရောကျအောငျ မောငျးထုတျ လိုကျကွလသေညျ..
မကောငျးဆိုး ဝါးကွီးထှကျသှား သဖွငျ့ မိနျးကလေးမှာ နှမျး နယျပငျပနျး သညျကလှဲ၍ရောဂါအားလုံး ကငျးစငျ လှငျ့ပြောကျသှားတော့သညျ။
ထိုအခါကမြှ သူကွီးတို့ဇနီးမောငျနှံမှာ သမီးလေးမှာ ဆရာကယျတဲ့ အသကျသာ ရှိပါတော့သညျဟု ဆိုပွီး လှနျစှာကြေးဇူးတငျလှ သဖွငျ့ငှသေား စဈစဈသုံး ပိဿာကို ကလပျနှငျ့ တငျကာသမီးကို ဦးပေါအား ကနျတော့စသေညျ။
ထိုအခါကမြှ ဦးပေါက သူသညျ ပယောဂဆရာတဈယောကျ မဟုတျဘဲ
အရောငျးအဝယျ လုပျသောကုနျသညျ တဈယောကျသာဖွဈကွောငျး ပွီးခဲ့သညျ့လ က တညျးကဤ မကောငျးဆိုးဝါးကွီး ကိုမွဈကမျးစပျ တှငျ တှရေ့သညျ့အကွောငျး မကောငျးဆိုးဝါးကွီးသညျ သမ်ဗုဒ်ဓဂေါထာ မှတဈပါး ဘယျဂါထာကိုမှမကွောကျကွောငျး..
ထိုအခြိနျမှာပငျ သူကွီး၏ သမီးလေးကို မကောငျးဆိုးဝါးကွီး ကဖမျးစားထားသညျ ဟုကွားသဖွငျ့
စတေနာဖွငျ့လာရောကျ ကုသပေးခွငျးဖွဈ ကွောငျး ရှငျးပွပွီး အတနျတနျကနျတော့သညျကွား ကလူနာရှငျမြား စိတျခမျြးသာစရေနျ ငှသေားတဈပိဿာကိုသာ လကျခံလိုကျသညျ
လူနာကိုလညျး နောကျထပျမကောငျးဆိုးဝါးကွီး ထပျနောကျယှကျ မလာရနျ သမ်ဗုဒ်ဓဂေါထာနှငျ့ မနျးပွီးလကျဖှဲ့လုပျပေးခဲ့သညျ..
ရှာသူရှာသား အားလုံးကိုလညျးညစဉျ အိပျယာဝငျခါနီးတိုငျး သမ်ဗုဒ်ဓေ ဂါထာကွီးကို ရှတျအိပျကွရနျတိုကျတှနျးခဲ့သညျ။
ထို့ပွငျနောကျကြောငျး ထိုငျဘုနျးကွီးမြားကို ပွိတ်တာကွီးကလာပွီးဒုက်ခမပေးစရေနျ သမ်ဗုဒ်ဓဂေါထာဖွငျ့ မနျးထားသောရေ မြားဖွငျ့ ကြောငျးတှငျးကြောငျးပွငျအား လုံး ကိုပကျဖွနျးပေးခဲ့လသေညျ။
ထိုအခြိနျမှစ နောကျတှငျ မကောငျးဆိုးဝါးကွီးသညျ ထိုရှာနှငျ့ကြောငျး တို့တှငျ ဘယျသောအခါမှ လာရောကျနှောကျယှကျခွငျး မပွုတော့ပေ .
.ဖတျရှု့အားပေးတဲ့ ပရိသတျကွီးလညျး သမ်ဗုဒ်ဓဂေါထာ အနကျအဓိပ်ပါယျမြားကို သခြောသိရှပွီးဖွဈလို့ ကနြေပျကွလိမျ့မယျလို့ထငျပါတယျ။
မူရငျး ရေးသားသူထံမှ ပွနျလညျဖျောပွအာသညျ။ Credit.ဆရာလငျးနိုငျ။
← လာဘ်ကောင်းစေဖို့အတွက် ပိုက်ဆံအိတ်ကိုနည်းလမ်းမှန်ကန်စွာအသုံးပြုနည်း
နမောငါးချက် စီးပွားတက်ဂါထာတော် နှင့် ပုတီးစိပ်နည်း →
ခြေ လက်တွေ ထုံကျဉ်နေသူတို့အတွက် ဆေးတစ်လက်
အာဆီယံမှာ ကျားတကောင်အဖြစ် ပြန်နိုး ထလာတော့မယ့် မြန်မာ
“ကော်ဖီသောက်သူတိုင်း သိရမယ့် လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခု”